बौद्धिक तथा अध्ययन क्षमतामा कमी – tranquilityhospital.com.np
— बौद्धिक क्षमतामा कमी हुनु अथवा अध्ययनमा कमजोरी देखिनु बालबालिकामा देखिने एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो । यसका कारणले गर्दा बच्चाले राम्ररी पढ्न सक्दैन । कक्षामा पढाएको कुरा बुभ्mन उसलाई गाह्रो हुन्छ, अनि बिभिन्न विषयमा उतीर्ण नहुने, एउटै कक्षा बारम्बार दोहो¥याउन पर्ने हुन सक्छ ।
— मुख्यतयाः निम्न कारणले गर्दा यस्तो समस्या हुनसक्छ ।
(क) सुस्त मनस्थिति
(ख) विशेष अध्ययन क्षमताको समस्या (स्पेसिफिक लर्निङ्ग डिसअर्डर)
सुस्त मनस्थिति भएको बच्चाले बोल्न, हिड्न अथवा आङ्खनो ख्याल गर्न सामान्य बच्चाको तुलनामा निकै बढी समय लगाउन सक्छ । सामान्य मानिसले गर्न सक्ने कतिपय गतिविधि उसले कहिल्यै नसिक्न पनि सक्छ ।
बालबालिकाको शारिरीक तथा मानसिक÷बौद्धिक विकास १८ वर्षको उमेरसम्म क्रमिक रुपमा हुंदै जान्छ । तसर्थ बालक सुस्त मनस्थिति भएको कुरा मुख्यतया १८ वर्षभन्दा अघि नै थाहा हुन्छ । बालकको बुद्धिको क्षमता कति छ भन्ने कुरा विशेष खालको बुद्धि परीक्षण ९क्तबलमबचम क्ष्लतभििष्नभलअभ त्भकत० का माध्यमबाट पत्ता लगाइन्छ । बुद्धिलाई मापन गर्ने एकालाई आइ.क्यू. ९क्ष्त्त० अथवा इन्टेलिजेन्स क्वोसेन्ट भनिन्छ । परीक्षण गर्दा आइ.क्यू. ७० भन्दा कम आएमा त्यस्तो बालकलाई सुस्त मनस्थिति भएको भनिन्छ ।
सुस्त मनस्थिति भएको बालकको दैनिक जीवन यापनका लागि चाहिने खूबी÷क्षमताहरु समेत सामान्य बच्चाको भन्दा कम बिकसित अथवा अविकसित हुन्छ । यस्ता क्षमताहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तै ः
१) आप्mनो दैनिक कार्य गर्ने क्षमता— लुगा लगाउने, आप्mनो सरसफाई गर्ने, आफै खाना खाने आदि ।
२) कुराकानी गर्ने क्षमता — अरुले भनेको कुरा बुभ्mने, बुझेर जवाफ दिने आदि
३) सामाजिक सम्बन्ध राख्ने क्षमता — साथीभाइ, परिवारका सदस्य तथा समाजका अन्य व्यक्तिसंग सम्बन्ध राख्ने, ठीक व्यवहार गर्ने आदि ।
सुस्त मनस्थितिको व्यापकता ९एचभखबभिलअभ या ःभलतब िच्भतबचमबतष्यल०
सामान्य जनसंख्याको १ देखि ३ प्रतिशतसम्ममा सुस्त मनस्थितिको समस्या देखिन्छ ।
सुस्त मनस्थिति किन हुन्छ ?
विभिन्न कारणले गर्दा बच्चामा सुस्त मनस्थिति हुन सक्छ ।
(क) बंशाणुगत कारण ः
सुस्त मनस्थितिको एउटा प्मुख कारण बंशाणुगत हो । आमा बाबुबाट असमान्य÷खराब बंशाणु बालबच्चामा आउनाले सुस्तमनस्थिति हुनसक्छ । डाउन्स सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम आदि जस्ता बंशाणुगत कारणहरु यसका उदाहरण हुन । ४० वर्ष नाघेका महिलाले शिशु जन्माउंदा यसता समस्या बढी देखिन्छन् ।
(ख) गर्भावस्ताको बेलाका समस्या ः
गर्भभित्र शिशुको विकासमा रोकावट आउनु ।
गर्भवती महिलाद्धार जा“ड, रक्सी तथा नशालु चीजको प्रयोग ।
गर्भवती अवस्थामा हु“दा विभिन्न संक्रमण हुनु — साइटोमेगालो भारइस, टक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस आदि ।
जथाभावी रुपमा चिकित्सकको सल्लाह विना नै विभिन्न औषधीको प्रयोग गर्नु ।
हानिकारक तत्वहरुसंग सम्पर्क — सीसा ९भिबम०, रेडियो विकिरण, एक्स—रे आदि ।
(ग) प्रसव अवस्थाका समस्याहरु ः
समय नपुगी जन्मेको शिशु
लामो तथा अप्ठ्यारो प्रसव÷बच्चा जन्मन गाह्रो हुनु
जन्मिने बित्तिकै बच्चा नरुनु÷ढिलो सास फेर्नु
प्रसवको क्रममा बच्चाको टाउकोमा चोटपटक लाग्नु आदि ।
(घ) बाल्यकालका स्वास्थ्य समस्या ः
मस्तिष्कको संक्रमण ः मेनिन्जाइटिस्, इन्सेप्mलाइटिस, दादुरा आदि ।
टाउकोमा गभ्भीर चोटपटक लाग्नु
अनियन्त्रित उपचार नगरिएको छारे रोग
वातावरण प्रदूषण, विशेष गरी शीशा ९ीभबम० तथा पारा (मर्करी) संगको सम्पर्क ।
सुस्त मनस्थितिको लक्षणहरु के के हुन्छन् ?
शारिरीक क्रियाकलापको विकासक्रममा ढिलाई — अरु सामान्य बच्चा भन्दा ढिला बस्ने, बामे सर्ने अनि ढिला हिड्न सुरु गर्ने हुन्छ ।
बच्चा कम चलाख जस्तो देखिन्छ ।
जहां राख्यो त्यही बस्ने, अनि अरु वातावरण र वस्तुप्रति प्रतिक्रिया जनाउने कुरामा सुस्त देखिन्छ ।
सामान्य बच्चाभन्दा ढिलो बोल्छ, राम्ररी बोल्न गाह्रो हुन्छ ।
आपूm स्वावलम्बी हुनका लागि चाहिने क्षमताहरुको विकासक्रम अन्यन्त ढीलो हुन्छ अथवा हुंदै हुदैन । जस्तै ः आप्mनो ह्रविचार गर्ने, लुगा मिलाएर लगाउने, टा“क सही ढंगले लगाउने अनि खोल्ने, दिसा पिसाब गरेपछि ठीक किसिमले सरसफाई गर्ने, सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने, खेल्ने आदि । आप्mनो सुरक्षामा ख्याल गर्ने क्षमतामा कमी हुन्छ । यसैले राम्ररी आप्mनो हेरविचार गर्न सक्दैन ।
बिद्यालयमा पढाइ तथा गृहकार्यमा अत्यन्त कमजोर हुन्छ तथा परीक्षामा कमजोर नतिजा ल्याउंछ । बारम्बार फेल हुन्छ ।
आपूmभन्दा कम उमेरका साथीभाइसंग बढी रमाउंछ ।
पैसाको हिसाव किताब गर्न तथा किनमेल गर्न गाह्रो हुन्छ ।
आप्mनो क्रियाकलापको परिणाम कस्तो हुन्छ भनी बुझ्न सक्दैन ।
सही निर्णय गर्न तथा समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।
सामाजिक नियम बुझाउन गाह्रो हुन्छ ।
सुस्त मनस्थितिको पहिचान जति जा“डो गर्न सक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ । चा«“डो भन्दा चा“डो पुनस्र्थापन गर्न तथा उपयुक्त तालिम दिन सकेमा सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाको जीवनलाई धेरै हदसम्म सहज बनाउन सकिन्छ ।
(२) स्पेसिफिक लर्निङ्ग डिसअर्डर ः
— स्पेसिफिक लर्निङ्ग डिसअर्डर भएका बालबालिकामा अध्ययन गर्न, कुनै नया“ कुरा सिक्नका लागि चाहिने विशेष क्षमताको विकास भएको हुदैन ।
— यसका कारणले गर्दा बुद्धि सामान्य र औसत बच्चाहरु सरह हु“दा हु“दै पनि बच्चाले राम्ररी पढ्न, लेख्न अथवा नयां सीप सिक्न सक्दैन ।
— यस्ता प््कारका क्षमतामा पढ्ने क्षमता, लेख्ने क्षमता, बोलने क्षमता, हिसाब किताब गर्ने क्षमता आदि जस्ता खूबीहरु पर्दछन् । स्पेसिफिक लनिङ्ग डिसअर्डरबाट पीडित बच्चाहरुमा यी खुबीमध्ये कुनै एकको समस्या हुन्छ । जस्तै ः
पढ्ने क्षमताको समस्या (रिडिङ्ग डिसअर्डर) — यस्तो समस्या भएको बच्चाले लेखेको कुरा सही रुपमा पढ्न सक्दै्रन । एउटा अक्षरलाई अर्कै भनी पढ्छ । पढ्दाखेरि हिज्जे मिल्दैन । तर पढ्ने क्षमता बाहेक अन्य सबै कुरामा ऊ सामान्य बच्चा जस्तै हुन्छ ।
स्पेसिफिक लर्निङ्ग डिसअर्डर भएका बच्चाहरुलाई बाल्यकालका व्यवहार सम्बन्धी गडबडीहरु ः
बालबालिकाको व्यवहार ठूला मान्छेको भन्दा फरक अवश्य हुन्छ तर पनि उमेर तथा बौद्धिक क्षमता अनुसार एउटै उमेर समूहका औषत बच्चाहरुको व्यवहार सामान्यतया उस्तै उस्तै हुन्छ ।
एउटै उमेर समूहका सामान्य बच्चाको दा“जोमा कुनै बच्चाको व्यवहार अलि फरक देखिन्छ र त्यसले गर्दा उसको दैनिक क्रियाकलाप, सिक्ने क्रम र गतिविधिमा नकारात्मक असर समेत पर्छ भने हामी यसतो व्यवहारलाई गडबडी अथवा समस्याको रुपमा लिन्छौं ।
त्यसैगरी, कुनै एउटा उमेरमा सामान्य लाग्ने व्यवहार अर्कै उमेरसम्म रहिराखेमा त्यसलाई कतिपय अवस्थामा हामी असामान्य भनी लिन्छौं । जस्तै, एउटा २ वर्षको बच्चाले कपडामा पिसाब फेर्ने व्यवहारलाई हामीले सामान्य भनी लिन सक्छौं, तर त्यही व्यवहार यदि एउटा १४ वर्षे बालकमा देखिन्छ भने त्यसलाई हामी व्यवहार सम्बन्धी गडबडी भनेर मान्छौं ।
बाल्यकालमा हुने व्यवहार सम्बन्ध्ी गडबडी धेरै प्कारका छन् । ती मध्ये केही महत्वपूर्ण व्यवहार सम्बन्धी गडबडहिरु निम्न छन् ः
(क) अटेन्शन डेफिशिट हाइपरएक्टिभ डिसअर्डर ः
— यो समस्याको शुरुआत ७ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुन्छ ।
— यो समस्याबाट पीडित बच्चाको कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता अत्यन्त कुम हुन्छ ।
— उसको ध्यान एउटा चीजमा केही छिन पनि टिक्दैन ।
— एक ठाउंमा बसिराख्न यस्तो बच्चालाई निकै नै गाह्रो हुन्छ । एक ठाउंमा बस्न आवश्यक हुने परिस्थितिमा समेत, ऊ उकै ठाउंमा बस्दैन ।
— कक्षा कोठामा कक्षा हुदा हुदैकै बेलामा समेत ऊ एक ठाउंबाट अर्को ठाउंमा हिड्छ ।
— पालो पर्खिन गाह्रो हुन्छ । अरुको पालो मिचेर काम गर्न खोज्छ ।
— असाध्यै चकचक गर्ने गर्छ ।
— चुप लागेर बस्न सक्दैन खटपट गरिराख्छ ।
— प्रश्न नबुझीकन जवाफ दिन्छ । त्यसैले उत्तरहरु गलत हुन्छन् । परीक्षा÷गृहकार्यमा थुप्रै गल्तीहरु भेटिन्छन् ।
— नयां कुरा देख्ने कि खोतलखातल गरिहाल्छन् ।
— दुर्घटनाको ख्याल नराखी काम गर्छन, त्यसैले चोटपटक लाग्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ ।
— साथीभाइले यस्तो बच्चालाई मन पराउ“द्रनन् ।
— औसत बुद्धि हुदा हुदै पनि, यस्ता बच्चाले राम्ररी बढ्न सक्दैनन्, अनि यिनीहरुको पढाई अति नै कमजोर हुन्छ ।
— अभिभावक र शिक्षकहरु समेत यस्ता बच्चाको गतिविधिले गर्दा वाक्क हुन्छन् ।
(ख) कन्डक्ट डिसअर्डर ः
— यस्तो समस्याबाट पीडित बच्चाहरु सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा अत्यन्तै बदमास हुन्छन् ।
— यस्ता बच्चा असुामाजिक गतिविधिमा सानै उमेरदेखि लाग्छन्, अनि नियम कानून मान्दैनन् ।
— भनेको कुरा पटक्कै नटेर्ने अनि ठीक उल्टो गतिविधि गर्ने गर्छन् ।
— यस्तो गतिविधि १२ वर्षको उमेरभन्दा अघि नै शुरु हुन्छ ।
— आप्mना साथीभाइ तथा अन्य बच्चालाई दुःख दिने, पिट्ने गर्छन् ।
(ग) स्कूल जान नमान्ने (स्कूल रिप्mजयूजल) ः
— कतिपय बच्चाहरुमा स्कूल जान नमान्ने अनि डराउने बानी देखिन्छ ।
— बारम्बार यसका कारणले गर्दा स्कूलमा उपस्थिति निकै नै कम हुन्छ ।
— यो समस्यालाई सकूल रिप्mयूजल अथवा स्कूल फोबिया पनि भनिन्छ ।
— यसतो बच्चा आमा अथवा परिवारका सदस्यबाट टाढा बस्नै नसक्ने अथवा छुटिृएर बस्न डराउने स्वभावको हुन्छ ।
— आप्mना बालबच्चालाई बढी नै संरक्षण दिने तथा आफै सधै अत्तालिने, तनावग्रस्त रहने आमाका बालबच्चा यस्तो समस्याबाट पीडित हुन सक्छन् ।
— बढी नै लजालुपन, कसैसंग बोल्न नसक्ने बानी, विद्यालयका समस्या, घरका पारिवारिक समस्या अथवा बच्चाकै अन्य मनोबैज्ञानिक समस्याका कारणले गर्दा समेत बच्चा स्कूल जान मान्दै नमान्ने हुनसक्छ ।
— बच्चाले स्कूल जान नमान्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाई त्यसको समाधानतिर लागेमा यस्तो बानी बिस्तारै हटेर जान्छ ।
(घ) ओछ्यानमा राति बारम्बार पिसाप फेर्ने (नक्टरनल इन्यूरेसिस) ः
— तीन÷चार वर्षको हुंदासम्म धेरैजसो बालबालिकाले रातिको समयमा ओछ्यानमा पिसाब फेर्न छोड्छन् ।
— चार वर्ष भन्दा बढीको बच्चाले, कम्तीमा हप्ताको दुई रात ओछ्यानमा पिसाब फेर्नेुलाई नक्टरनल इन्यूरेसिस भनिन्छ ।
— मनोबैज्ञानिक अथवा शारिरीक कारणले यस्तो समस्या हुन सक्छ ।
— यस्तो समस्या भएका बच्चाहरुलाई जिस्काउने अथवा सजाय दिने गरेर समस्याको समाधान हुदैन ।
— यो समस्या धेरै जसो बच्चाहरुमा केही वर्षमा हराएर जान सक्छ ।
— धेरै समयसम्म यस्तो समस्या रहिराखेमा मनोचिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
(ङ) टेम्पर टयान्ट्रम्स (अत्यधिक रिस देखाउनु)
— धेरै जसो २—३ वर्षका भर्खर हिड्दै गरेका बच्चाहरुले बेला बेलामा अत्यधिक रिस देखाउन सक्छन् ।
— चिच्याउने, कराउने, टाउको ठोक्ने, टोक्ने, सामान फाल्ने, लात्तीले हान्ने आदि जस्ता व्यवहार सहितको अत्यधिक रिस नियमित जस्तो देखिन थालेमा यसलाई टेम्पर टयान्ट्रम्स भन्ने समस्या मानिन्छ ।
— यस्तो व्यवहार देखाएको बेलामा अभिभावकले अत्यधिक रुपमा ध्याद दिंदा, यो समस्या झनै बढेर जान्छ । मैले यस्तो व्यवहार देखाएमा बसैले मेरो कुरा सुन्छन् भनी बच्चाले गलत रुपमा बुभ्mन सक्छ ।
— यस्तो व्यवहारलाई बढी ध्यान दिने अथवा यसतो व्यवहार देखाए पछि बच्चाको माग पुरा गरिदिने जसतो काम आमा बाबुले गर्नु हुदैन । आप्mनो कुरा राख्न अथवा माग पूरा गराउन देखाउनु पर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ तथा कुन व्यवहार गर्ने÷कुन नगर्ने भन्ने कुराको जानकारी बच्चालाई गराउन पर्ने हुन्छ ।
(च) ब्रेथ होल्डिङ् स्पेल्स ः
— यो पनि आपूmतिर ध्यान आकृष्ट गराउनका लागि बच्चाहरुले प्रयोग गर्ने एक प्रकारको असामान्य व्यवहार नै हो ।
— बच्चा रुन थाल्न, अनि अनियन्त्रित रुपमा रुंदारुंदै एकछिनलाई सास फेर्न समेत रोक्छ ।
— तनाव, रिस, चिन्ता, आप्mनो माग पूरा नहुनु, जिद्दीपन आदि जस्ता कारणले गर्दा बच्चाले यस्तो व्यवहार देखाउन सक्छ ।
— बच्चाले सास फेर्न छोड्दा, आमा बाबु निकै अत्तालिन सक्छन्, तर यो व्यवहार ज्यानकै लागि खतरनाक साबित हुने चाहि हैन भनी उनीहरुले बुभ्mन आवश्यक हुन्छ ।
— यो व्यवहारलाई पनि बढी मात्रामा ध्यान दिने अथवा यसतो व्यवहार देखाएमा माग पुरा गरिदिने गर्नु हुदैन ।
बाल्यकालमा विभिन्न प्रकारका व्यवहार सम्बन्धी गडबडी÷समस्या देखिन सक्छन् । समयमै यस्ता समस्याको पहिचान अनि निदानतिर लागिएमा सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।
बाल्यकालका अनुभूतिजन्य÷भावनात्मक समस्याहरु ः
( सामान्य मान्छेका अुनभूति तथा भावनाहरु समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हुन सक्छन् ।
( तर कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको अनुभूति तथा भावनाहरुमा असामान्य गडबडीहरु देखिन सक्छ ।
( यस्तो गडबडी तथा समस्या ठूला मान्छे मात्र नभइ बच्चाहरुमा पनि देखिन सक्छ । बाल्यकालमा देखिने यसतो समस्या थुप्रै भएपनि ती मध्ये मुख्य समस्या निम्न छन् ः
(क) डिप्रेसन (उदासीनता)
(ख) एङ्गजाइटी — विशेष गरी फोबिया
(ग) कन्भजृन÷डिसोशिएसन (हिस्टेरिया)
(क) डिप्रेसन ः
डिप्रेसन अथवा उदासीनताको रोग बाल्यकालमा हुन सक्ने समस्या हो ।
बेलैमा यसको पहिचान र उपचार गर्न आवश्यक छ ।
मस्तिष्कमा हुने रासायनिक गडबडकिा कारणले यस्तो समस्या हुनसक्छ । बंशाणुगत रुपमै परिवारका अन्य सदस्यहरुमा डिप्रेसनको रोग छ भने बाल्यकालमै समेत यो समस्या आउन सक्छ ।
डिपशन भन्नको लागि कमसेकम २ हप्तासम्म मनमा लगातार उदासीपना र झर्को लागिराख्ने हुनुपर्छ ।
बच्चाको पढाई बिगिदै जान्छ ।
पढाईमा ध्यान केन्दित गर्न उसलाई गाहो हन्छ ।
बढी मात्रामा रिसाउछ, भनेको मान्दैन , साथी भाइसग झगडा गर्छ ।
खेल्ने रुचि कम हदै जान्छ ।
निन्दा बिगिने, भोक कम हने हन्छ ।
एक्लै बस्न रुचाउछ ।
टाउको दख्ने, पेट दख्ने, जीउ दख्ने अबादि जस्ता विभिन्न लक्षण पनि देअिन सक्छ, तर विभिन्न परीक्षण गर्दा समेत कनै शारिरीक रोग देखिंदैन ।
डिपशनको शका लागेमा शरुको अवस्थामानै उचित सल्लाह र उपचारको आवश्यकता पर्छ ।
तनाव, डर तथा त्रास सामान्य मानिसले पनि महसस गर्ने अनभति हन । तर सधै जसो डर र त्रास मात्र अनभव भइराखेमा त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई हामी तनावको रोग अथवा एङ्गजाइटी डिसअर्डर भन्छौं । एङ्गजाइटी डिसअर्डर धेरै पकारका हन्छन । ती मध्ये बाल्यकालमा फोबिया भनिने एङ्गजाइटी डिसअर्डर बढी मात्रामा देखिन्छ ।
कनै पनि वस्त अथवा परिस्थितिका अस्वाभाविक तथबा अत्यधिक डर भइराऋने समस्यालाई फोबिया भनिन्छ ।
यो डरका कारणले गर्दा बच्चा त्यस्तो परिस्थितिको अगाडि सामान्यतया पर्न चाहदैन । त्यस्तो वस्त अगाडि देख्दा अथवबा त्यस्तो परिस्थितिमा पग्दा मात्रै समेत उ अत्तिनै तर्सिन्छ ।
फोबिया विभिन्न पकारका वस्त अथवबा परिस्थितिसग सम्बन्धित हन सक्छ — जस्तै जनावरको डर, अध्यारोको डर, सामाजिक परिस्थितिको डर आदि ।
ग) कन्भर्जन ÷ डिशोशिएटिभ डिसअर्डर (हिस्टेरिया)
अवचेतन मनका तनाव तथा मनोवैज्ञानिक चिन्ता सजिलो सग व्यक्त गर्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिन्छ ।
यस्तो समस्या ठला व्यक्ति अथवा बच्चा जसमा पनि देखिन सक्छ ।
मनमा रहेका अव्यक्त चिन्ताहरु कतिपय अवस्थामा शारिरीक लक्षणको रुपमा देखिन समेत सक्छ । हिडन नसक्ने, बोली हराउने, हात खटटा नचल्ने अथवा बेहोश हने जस्ता लक्षण एक्कासि देखा पर्न सक्छ । यस्ता लक्षणहरु व्यक्तिले आफै जानी जानी यरेका लक्षण हैनन । यी लक्षणहरु हन अथवा देखा पन, व्यक्तिको आफनो नियन्त्रणमा हने करा हैन ।
यस्तो लक्षण देखा परेपछि अत्तालिने, बिरामीका लक्षणहरुमा बढी मात्रामा बढी मात्रामा ध्यान दिने, के भो कसो भो भनी बढी सोध्ने अबादि जस्तबा करा बढी गन हदैन ।
बढी मात्रामा लक्षणमा ध्याल दिने गरेमा यस्तो समस्या झनै बढेर जबान सक्छ ।
यस्तो रोगका कारण बिरामीले अरुबाट पाउबन सक्ने बढी ध्यान तथा फाइदबाहरु सकेसम्म कम गर्नपर्छ ।
चिन्ता तथबा तनाव गराउने करा केही छ वा छैन भनी खोजी गर्ने तथा त्यसको समाधानतिर लाग्न जोड दिबने गर्न बढी महत्वपर्ण हन्छ ।